Tag: codbixinta sms | Martech Zone
Tag: codka sms
Trumpia waxay soo bandhigeysaa suuq geyn dhan ah oo hal suuq ah oo ay kujirto fariimaha moobiilka, iimaylka suuq geynta warbaahinta bulshada, baahinta codka iyo fariimaha deg dega ah. Intaa waxaa sii dheer, nidaamku wuxuu leeyahay miirayaal caqli badan, bartilmaameed firfircoon, maareynta ololaha, kuuboonada iyo horumariye adag API. Sidoo kale waa la cadayn karaa! Barmaamijka 'Trumpia platform' waa qolal badan oo telefishan ah oo loo isticmaalo aruurinta, farriinta, ka qayb qaadashada iyo dhiirrigelinta waxyaabaha aad bixiso iyada oo loo marayo mobilada, emaylka iyo warbaahinta bulshada. Waxay ku bixiyaan waxyaabo aad u tiro yar istiraatiijiyad kasta: Uruuri